NLD KHUAKHAN CU SALAI CBT THAWNG HMANH A CELH LO – The Chinlung Post
NLD KHUAKHAN CU SALAI CBT THAWNG HMANH A CELH LO
July 1, 2020 admin Chin 0
Zarhpini theng ah thimnak tuah timh hoi cu တနင်္ဂနွေနေ့ကိုမှ ရွေးကောက်ပွဲနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပြန်ရော။:Kum 2010 thimnak lioah Zarhpini ah an rak tuah caah hihi Khrifami caah ka ni thiang asi i harsatnak tampi kan ton caah kan hrialpiak uh tiah hehchet kan chimrel caah ahnu ahcun an kan hrialpiak rua tiah kan ruah.
Asinain atu ah NLD cozah nih Zarhpi Nithiang ni theng cu an hun thim hoi cu lungrawk asi ko.Thlanglei Laitlang khuate cheukhat ahcun mekuang hi khuakhat pakhataum lo (khua thum ah pakhat hna asi) caah vote thlak duh ah khual ah va kal ahau. Cucaah zinglei pumh dih hnu vote thlak ding ithawh kha tar, damlo le pum tlamtlinglo hna caahaharter chin.
Zarhpi nithiang hrimhrim cu Khrifami nih ulhmi si i an kan upat piak awk si ko. Ni dang tampiaum lo bang.၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပလို့ ကျန်တော်တို့ ခရစ်ယာန်တွေအတွက် အခက်အခဲရှိကြောင်း၊ ခရစ်ယာန်များ၏ နေ့ထူးနေ့မြတ်မို့ လေးစားအသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အခြားရက်များစွာထဲမှာ ကျင်းပပေးစေလိုကြောင်း အကြိမ်ကြိမ် တောင်းဆိုခဲ့လို့ နောက်ပိုင်းတွင် လိုက်နာရှောင်ရှားပေးခဲ့သည်ဟု ယူဆထားသည်။
ယခု—NLD အစိုးရခေတ်မှာ Sunday ကို ထပ်ရွေးလိုက်တာက ဘာသဘောပါလိမ့်။ အခြားရက်တွေ မရှိတော့ဘူးလား။.ခရစ်ယာန်များအတွက် Sunday ဟာ ဘုရားကျောင်းသွားတဲ့ ဥပုတ်နေ့ ဖြစ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ချို့ ချင်းပြည်နယ်ကကျေးရွာများတွင် မဲရုံကို ၂/၃၇ွာမှာ တစ်ရုံထားတာလည်းရှိတော့ အဲဒီနေ့ ဘုရားကျောင်းပြီးမှ တစ်ခြားရွာမှာ သွားပြီး မဲသွားပေးဖို့ ဆိုတာ သက်ကြီးပိုင်းနဲ့ နာမကျန်းနဲ့ မသန်စွမ်းတွေအတွက် ပို ခက်ခဲစေတယ်။
ချင်း/ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ အခက်ခဲနဲ့ ခံစားချက်(values)ကို နားမလည်ပေးမှုနဲ့ မျက်ကွယ်ပြုမှုဖြစ်လို့ UECက ဒါကိုလုံးဝ ပြန်သုံးသပ်သင့်တယ်။. Credit: Salai Ceu Bik Thawng
KAN LAINU AH AMAH NAK MUIDAWH HI AN UM TI HNGA MAW? A KONGLAM